Semalt Expert: Ny famonoana, ny famonoana, ny scareware ary ny Zombies
Misy karazany efatra ny tranonkala browsers - Internet Explorer, Google Chrome, Safari ary Mozilla Firefox. Tsy mety ny miteny fa ny mpampiasa Internet Explorer dia miatrika olana samihafa tato anatin'ny volana vitsy. Maro amin'izy ireo no nitatitra momba ny fanafihana hacking sy phishing amin'ny aterineto. Na izany aza, manavotra ny tenany ny tranonkala ary lasa mahomby kokoa noho ny hafa. Raha tsy misy isalasalana, ny mpizara tranonkala rehetra dia tsara ny miaraka, fa ny iray atokisana amin'ny haingam-pandeha, ny fahamendrehana ary ny filaminana dia tsy misy afa-tsy Google Chrome.
Max Bell, mpitantana ny Success Successor Semalt , dia milaza fa ny Internet Explorer dia manana olana lehibe momba ny fiarovana izay iantsoan'ireo mpampiasa azy ny fanavaozana ny fijerin'ny browsers indray mandeha na indroa isan-kerinandro. Ny milina masiny dia tokony hanana rafi-pandam-bahaolana farany mba hahafahana mijery ny fandaharana amin'ny viriosy sy malware. Google Chrome dia lazaina ho mpizaka tranonkala-namana ary azo itokisana kokoa noho ny tranonkala hafa. Firefox sy Safari dia ambany indrindra ary tsy manome valiny marina tahaka ny Google Chrome.
Phishing, Scareware, ary ny fandikan-dalàna
Mba hiantohana ny fiarovana ny fitaovana ampiasainao amin'ny rakitra, phishing, ary ny fikajiana, dia tokony hametraka ny navigateur farany ianao ary tsy manindry ny mailaka tsy fantatra. Ankoatra izany, tokony tsy hanokatra ny mailaky ny mailaka na oviana na oviana ianao ary hanandrana hanaiky ny mpandefa raha tsy manokatra izany. Raha mihevitra ianao fa azo antoka ny mpandefa, tokony hitazona ny cursor amin'ny rohy hahitana ny URL -n'izy ireo..Raha toa ka mijery ara-drariny ny adiresy, dia azonao atao ny manokatra ny mailaka attaché ary mamaky izay voasoratra ao anatiny. Azonao atao ny misoroka ny phishing, scareware, ary ny fialana amin'ny zava-misy ao an-tsaina ary afaka miantoka ny fiarovana anao amin'ny Internet.
Raha mahazo fampandrenesana mailaka avy amin'ny tranonkala miaraka amin'ny rohy sy hafatra anatiny ianao, dia tsy tokony hijery na hanokatra ireo rohy na oviana na oviana. Fa kosa, tokony hiezaka hanombantombana hoe iza ilay mpandefa ary inona no antony handefasana izany mailaka izany. Raha azonao avy amin'ny loharano azo antoka ny mailaka, azonao atao ny manokatra sy mijery ny hafatra. Azonao atao ihany koa ny mandeha mankany amin'ny tranokalany amin'ny alalan'ny fanoratana ny adiresy Internet na mampiasa marika ho an'ity tanjona ity.
Raha sendra mailaka dia hita ao amin'ny lahatahiry spam; Tsy tokony hanokatra izany ianao satria mety ho famantarana fa alefan'ny mailaka ny mailaka. Mety ho mailaka phishing izany, mametaka anao amin'ny tricks sasany. Misy mailaka samihafa no alefa, ary tsy ho vitan'ny olona hahitana hoe iza no mailaka azo antoka. Misy ny fahafaha-miditra amin'ny tranonkalan'ny tranonkalan'ny spoofy
Tokony hotadidinao fa ny orinasa ara-dalàna sy ny orinasa ara-dalàna dia tsy mandefa mailaka amin'ny mpanjifany avy amin'ny ID tsy miankina. Tsy mangataka anao koa ry zareo mba hijery ny rohy tsy misy antony manokana. Raha mahazo mailaka ianao, dia mety hihevitra fa ara-drariny izany, saingy tsy izany.
Nanolotra programa maimaim-poana marobe i McAfee, saingy ny tsara indrindra dia SiteAdvisor. Ity programa ity dia mamela anao hamantatra ny mety ho voka-dratsin'ny viriosy sy tranokala ahiahiana amin'ny loko mampifandray ireo rohy amin'ny valin'ny fikarohana. Ny fitaovan'ny ordinatera tsy misy rafitra sy rafitra efa tranainy dia mety hampitombo ny viriosy matetika kokoa noho ny ordinatera miaraka amin'ny rafitra farany amin'ny rafitra miasa Source .